Fiakaran'i Isaia - Wikipedia
Ny Fiakaran'i Isaia dia boky apokaliptika apokrifa kristiana izay nosoratana tamin'ny taonjato faha-2 angamba tao Siria, misy fizaràna roa io boky io ka ny voalohany dia mitantara ny maritiora niaretan'ny mpaminany Isaia ary ny faharoa miresaka momba ireo fahitana naseho an'i Isaia tany an-danitra. Nosoratana teo amin'ny fiangonana kristiana manandratra ambony ny fanomezam-pahasoavana (karismatika) sy mino ny tsy fananan'i Jesosy vatana ara-nofo (doketisma) io boky io.
Manomboka amin'ny fitantarana ny niakaran'i Manase zanak'i Hezekia (na Ezekiasy) teo amin'ny seza fiandrianana ny fizaràna voalohany (1 -- 5). Naminany i Isaia fa ity mpanjaka vaovao ity dia mpanompon'ny devoly sady hampijaly azy. Nifanaraka amin'ny voalazan'ny faminaniana tokoa ny fitondran-tenan'ilay mpanjaka, ka nanapa-kevitra hitoetra any an-tendrombohitra miaraka amin'ny zanany lahy sy ny mpaminany namany sasany i Isaia. Nefa ilay mpaminany sandoka atao hoe Bekhira (na Belkira) izay nahazo tsindrimandry tamin'ny devoly Beliara (na Beliala) dia nandresy lahatra an'i Manase mba hamono an'i Isaia izay nolazainy fa mpamadika. Tsy niala tamin'ny finoany nandritra ny fampijaliana azy i Isaia.
Ny tapany faharoa (6 -- 11) dia mirakitra ny fitantaran'i Isaia tamin'ilay zanany izay zavatra hitany tany an-danitra taorian'ny namonoana azy. Taorian'ny nitetezany ny lanitra enina voalohany, ny mpaminany Isaia dia tonga tao amin'ny lanitra fahafito. Hitany tao Andriamanitra, niaraka tamin'ireo anjely lehibe, isan'izany i Jesosy ilay "zanany malalany", izay nitantara taminy ny amin'izay zavatra tsy maintsy ho tanteraka aminy amin'ny ho avy, indrindra ny fahafatesany sy ny fitsanganany ho velona ary ny fiakarany any an-danitra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiakaran%27i_Isaia&oldid=818922"
Dernière modification le 21 Aogositra 2018, à 20:58
Voaova farany tamin'ny 21 Aogositra 2018 amin'ny 20:58 ity pejy ity.